जुत्ता चप्पल किन उल्टो राख्न हुँदैन? थाहा पाउनुहोस्
January 25, 2021 2174
कतै जुत्ताचप्पल उल्टिएको वा पल्टिए’को देखे त्यसलाई सुल्ट्याउने गरिन्छ । तपाईं हामी पनि यस्तो देखेमा सुल्टो पार्दछौ । तर किन सुल्टो पारिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । जुत्ता चप्पल उल्टो भए यसले नराम्रो हुन्छ मात्र भनिन्छ । कतिले बाटो वा आँग’नमा उल्टो जुत्ता’ भए साइत बिग्रन्छ भन्छन् । तर खास के हो त ?
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जीवनसँग सम्बन्धि’त हरेक वस्तुमा ग्रह जोडिएका हुन्छन् । जसमा हामिले पहि’रिने जुत्ताचप्पल पनि आउँदछ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हाम्रा जुताको सम्बन्ध शनी ग्रहसँग हुन्छ ।
किनकी शनी मानिसको पैताला’मा रहने गर्दछ । य’सकारण पनि शनीको दशा लागेको ब्य’क्तिले जुत्ताच:प्पल दान गर्नुपर्ने मान्यता रहेको हो । त्यसैले जुत्ताचप्पल उल्टो भए शनीको दशा लाग्ने मान्यता भए अनुसा’र यसलाई ‘सुल्टो पारिन्छ । वास्तु’शास्त्र अनुसार घरमा जुत्ता:चप्पल राख्ने र्‍याक उत्तरपूर्वी दिशामा फर्केको हुनुहुदैन ।
यस दि’शामा र्‍याक फर्केमा त्यहा सू’र्यको प्रकाश पर्ने भएका’ले जुत्ताको कारण सकारात्मक प्रभाव कम भएर जाने गर्दछ । शास्त्रीय मान्यता अनुसार कहिल्यै पनि उप’हारमा मिलेका तथा चोरेर ल्याएका जुत्ता लगाउनु हुँदैन । यसले भाग्य’बाट बञ्चित गर्दछ ।उपहा:रमा पाएका जुत्ता व्यक्तिको करिय’रका लागि हानिकारक मानिन्छ ।
Prevसीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम कस्को ? रवि बिनै न्युज२४ ले चलायो कार्यक्रम (भिडियो सहित)
Nextरवि लामिछाने बाहिरिएपछि सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रममा सम्झनाको इन्ट्री (भिडियो सहित)
यस्तो अवस्थामा गेष्टहाउस सञ्चालकसहित ५७ पक्राउ..हेर्नुहोस्